Kedu ihe ị kwesịrị ịdị na-eme na Dubai? | Ọrụ - Ọrụ - Nlekọta Ọrụ Njem Nlekọta Na Dubai
Kedu ihe ị ga-eme na Dubai?
Ọrụ na Middle East
Na-achọsi Ịbụ Otu n'ime Obodo Ndị Dị na Futuristic Na Ụwa
Nwere ike 22, 2019
Ihe ị ga-eme na Dubai
Ihe ikwesiri ime n’oge ị na-achọ ọrụ n’ime Dubai?
Ọfọn, mgbe ị na-achọ ọrụ na Dubai. Enwere ụfọdụ ihe ịchọrọ ịma tupu itinye akwụkwọ. N’ezie, anyị niile maara na ọ bụghị ọrụ dị mfe ịrụ. Isi ihe siri ike bụ ime ka uche gị kwụ ọtọ mgbe ọ bụla. Ya adala mba ma mee ka uche gi guzosie ike. Gwa eziokwu na ọ dị mfe ide. Ihe siri ike jikwaa.
Mgbe ị ga-anọ na-achọ ọrụ na Middle East, enwere ihe ole na ole ị ga-ezere. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ya nyocha oru na Dubai na Abu Dhabi.
Ikike nke iche echiche Chebe ike ịhụ!
Ihe Nchọta Ochicho Kasị Achọ Nzuzo
1. Enweela otutu ozi na Resume gị
The ọrụ ahụmịhe n'ezie anaghị arụ ọrụ n’elu akwụkwọ agụmakwụkwọ, ọ gwụla ma i dere ezi ahụmịhe dị mkpa maka ọrụ a ga-enye gị. Nke kachasị mma bụ nke na-egosi ihe ị ga-enye ndị na-ahụ maka ọrụ na Middle East.
CV gị kwesịrị ịbụ ihe Inwere ike inye onye na-eweghachi ọrụ ma ọ bụ onye njikwa HR. N'ihi na nke a bụ naanị ihe dị mkpa maka onye were ya n'ọrụ. Ihe kacha njọ gbasara ihe cv gi bu ide ihe ichoro na inye oru. Gbalịa ịgụnye naanị ahụmịhe bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ịkwesighi ịgụnye afọ 34 nke akụkọ ọrụ kemgbe ị malitere ire sịga ọ bụla maka $ 1 na mpaghara mpaghara. Ọ dịghị mkpa ịgụnye ụbọchị ngụsị akwụkwọ gị n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma ọ bụ nke gị -eme ka ụbọchị gị ezumike.
Ònye bụ onye kacha asọmpi nke gị?
Puku kwuru puku mmadụ na-eziga CV nke ha na Dubai. Yabụ, na-ekwukarị, ị nwere naanị ihe dịka 3 sekọnd iji mee ka echiche banyere onye na-ewe ndị ọrụ ma ọ bụ HR manager. Gbaa mbọ hụ na CV gị dị mma tupu i zigara ya na ngalaba HR.
Ndị isi bụ ndị achọ ọrụ na Dubai bụ ndị India, Pakistani na Ndị Iran. Ị nwere ike ijide n'aka na ọtụtụ n'ime ha na-arụsi ọrụ ike iji nweta ọrụ na Middle East. Ọtụtụ ndị ọrụ ala ọzọ na-elele Dubai blọọgụ maka ndụmọdụ na nyocha oru. Ha na-eji ihe omuma iji nweta onyinye ọrụ karịa ngwa ngwa !.
2. Enweghi Add Enwere otutu ozi na akwụkwọ edemede gị
Ndị na-ahụ maka ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai na ndị isi oche HR needkwesighi ịgụ gbasara ahụmihe nke onwe gị. Ọ bụ ezie na ị dara ma ọ bụ nata ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke eze nweta ihe ịga nke ọma.
Should ga kwesịrị naanị ebe ihe kpatara na ị choro oru a. Edekwala ihe ọ bụla banyere ihe ga-adịrị gị mma. N'ihi na ị nọ n'ọnọdụ ọjọọ na ị na-achọ enyemaka. Ndị na-agụ ọrụ na Dubai kpọ asị nke ukwuu.
Isi ihe ọzọ bụ ọnọdụ onwe gị na nke ezinụlọ gị. N'ezie, ha kwesiri ịnọ naanị maka gị. Dịka ọ dị n’usoro gị, onye njikwa ego chọrọ ịma ihe ị ga - emere ụlọ ọrụ.
Na ihe ị kwesịrị ilekwasị anya?
Gbalịa idobe akwụkwọ ozi mkpuchi gị mgbe niile lekwasịrị anya na ọrụ a. Gbalịsie ike itinye nkọwa zuru ezu banyere ihe mere ị ji abụ onye nchịkwa zuru oke maka oru na okwesiri ka a juo ajuju. N’aka nke ọzọ, gbaa mbọ hụ na ndị were gị n'ọrụ ga-ahụ gị ka onye bara uru si mba ofesi.
Na-ewe oge tupu ị eziga nkọwa gị. Gbaa mbọ hụ esi dee ederede echere n'ihi na onye ọ bụla na-arụrụ ọrụ. Ee, anyị ma na ọ bụ nnukwu ọrụ. Mana nke ahụ bụ naanị ụzọ iji nweta ọrụ na Dubai. Mgbe niile tozuru oke asambodo gị na enye ọrụ. Yabụ onye na-ewe ihe ga - ahụ ihe kpatara ị jiri were ezigbo vootu.
3. Ahụmahụ na Egwuregwu gị maka Job
Gbaa mbọ hụ na ị dakọtara ahụmịhe gị na ọrụ nwere ike ị na-enye. Ọrụ nyocha bụ ogologo usoro na UAE. Yabụ, n'eziokwu, ahụmịhe gị atụnyere ọrụ nkewa n'ịntanetị chọrọ ka ọ zuo oke. Ọfọn, n'ozuzu ha na-ekwu, ahụmịhe gị kwesiri ịbịaru nso na Dubai. N'ihi na puku kwuru puku ndị mmadụ na Middle East na Eshia.
Kwa ụbọchị, ha na-eziga CV nke ndị ọrụ. Yabụ, gbaa mbọ nwee ahụmịhe ọ bụla o kwere omume. Gbaa mbọ hụ na ahụmịhe gị dakọtara n’etiti ọrụ ahụ na gị dịka onye ndoro-ndoro.
Gịnị dị mkpa?
Ọ dị oke mkpa iwere oge na mgbali ọ kachasị n’ebe ọrụ juru dịka Dubai. Jiri nwayọ na-achọ ọrụ ndị kwekọrọ na iru eru gị na nkọwa ọrụ.
Ọ dịịrị gị igosi onye na-ahụ maka ọrụ ego kedu ihe mere i ji zuru oke maka ọrụ ahụ. Hapụ atụmatụ ahụ pụọ na nhazi.
4. Na-eche na ị dị njikere ịbị ọrụ n'otu minit mgbe Interview ahụ gasịrị
Ọ dị mma, njehie ọzọ nke ahụ ihe ị ga - eme bụ naanị akwa ejiji na - ekwesịghị ekwesị maka ajụjụ ọnụ maka ọrụ na Dubai. N'ezie, obodo a bụ mba Alakụba, mana azụmahịa ụkpụrụ omume na-arụ ọrụ nke ọma na mba a.
Gbalịa ka ị ghara imebiga ya ókè na a gbara ajụjụ ọnụ. N'ihi na nke ahụ nwere ike imerụ gị ahụ ihe ọ bụla dị ka ihe nzuzu. Tupu you na-akpọ oku na nzukọ ịgbalị ime ntakịrị nyocha na ụlọ ọrụ ahụ na gburugburu ebe ọrụ.
Ị nwere ike ịjụ ndị ọzọ maka ezi uche?
Know mara onye ọbụla n’ime nzukọ ndị ị tinyere n'ọrụ ?. Ọ bụrụ na ejighị Linkedin ma jụọ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ maka koodu akwa. Yabụ, ọ bụrụ na ijighi n'aka banyere nkọwa mee ka ndị ọzọ chee na ọ dị mfe ma dịkwa irè. Jụọ ndị ọzọ ihe ha na-eyi kwa ụbọchị. Nke ahụ ga-abụ ihe mbụ onye njikwa ego ga-achọpụta na Dubai.
5 Na-ekwu Ihe Ọjọọ na Ajụjụ Ajụjụ Job
Isi nke ise na-ekwu banyere ihe ndị ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Dị ka ị na-etinye n'ọrụ na mbido ma na-ekpuchi leta. A recruiter si Dubai ga-enwe echiche banyere onye ị bụ na ihe ị na-eme iji bie ndụ.
Ihe karịrị 60% nke ụdị nkọwa dị etu a siri kọwaa. Ekwenyeghi ikwu, nke ahụ ka mma ị kwesịrị ịhapụ ọrụ echeghị eche nkọwa mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ ọrụ. Iji maa atụ, onwe gị ma ọ bụ azụmaahịa gị na-ada n'oge mmepe ọrụ. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, kedu ihe mere na igaghi enwe onwa ole na ole na ahuhu gi.
Na ihe dị mkpa ka ị leba anya mgbe ahụ?
Ajụjụ ọnụ ahụ kwesịrị ịbụ ihe niile ị ga - eme maka ya ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na enyere gị ọrụ ahụ. Kekọrịta ikike na iru eru nke na-eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ maka ọnọdụ ahụ. Kedu ihe ị ga-eme na Dubai ?.
Gbado onwe gi na ime egwuregwu n'etiti onwe gị na ọrụ inye aka. N’aka nke ozo, ikwuputa ihe kariri ime ka ike ghapu gi na onye a choro icho oru.
6 Kwụsị - Njehie Ajụjụ Ọnụ na UAE
United Arab Emirates na- ka mma karịa mba nke ọ bụla. N'ezie n'ezie na Dubai, Abu Dhabi ma ọ bụ Sharjah ị ga - enwe mkparịta ụka nke na - emeghị nke ọma.
Mgbe ụfọdụ, echeghị ya ka ọ bụrụ, na ahụmịhe gị bụ ụzọ ziri ezi maka enye ọrụ a. Ọ bụrụgodị na ị ga - agafere ajụjụ ọnụ ma ịfụbeghị ya UAE.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ajụjụ ọnụ na mmejọ izugbe na-adị mfe izere. Dịka ọmụmaatụ, egbula oge, echela mgbe a ga-akpọghachi gị. Ọ bụ naanị otu ka ọ ka mma ịkpọ onye nwere ike iwere ọrụ ma gosi ya na ị chọrọ ọrụ.
7 Jide n'aka na ị nwere Ntugharị si UAE
Otu n'ime ihe ndị kachasị nkọwa dị mkpa maka inweta ọrụ na Dubai. Nani ihe enwere ugbua inwere site na Dubai na CV gi. Na-adị njikere mgbe niile inye nkọwa kọntaktị mgbe ị na-achọ ọrụ.
Ndị oru nchịkwa mmadụ ga-ele anya nke ọ bụla n'ime ha.
Ihe kachasị njọ na ị chọghị ime bụ ịnweta ndị na-elekọtabu gị n'oge ikpeazụ ma gwa ha na ịchọrọ ịnye nzere etu ọ dị mma na kedu ike ị ga - arụ ọrụ.
Na mbido, kpọọ ngalaba HR gị. Mepụta ndepụta ederede zoro ezo nke dị njikere inye kama naanị site na ụlọ ọrụ United Arab Emirates. Kedu ihe ị ga-eme na Dubai ?. Debe nhọrọ nke gị ka ịgbanye ọkụ àkwà mmiri. Maghị mgbe ịchọrọ ha.
8 Na-echefu Isoro Mgbe I Nyochaa
Omume ọjọọ ọzọ bụ Agaghị agbaso mgbe a gbasịrị gị ajụjụ ọnụ. N'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-enye gị ohere ọzọ iji chetara gị na iji mee ezigbo echiche.
Ndị ọrụ na-agụ ọrụ na Dubai dị ka ka e wee nwee ekele maka oge na mbọ ha. Yabụ, a smartly mere ekele gị email-abụkarị otu ụbọchị mgbe ajụjụ ọnụ. Kachasị anya bụ ụzọ dị mma iji gosi gị nwee ekele maka oge na ohere ị nwere iji jikwaa.
Followingso na-enyekwa gị ohere ọzọ ịgbakwunye ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa ichefuru echefu. Iji maa atụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ikwu n ’oge ajụjụ ọnụ. Dị ka ahụmịhe gị na ụlọ ọrụ xyz. Ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ nke ahụ nwere ike inyere ha aka ikpebi iburu gị n’ụgbọ.
9 Ịhapụ Job Gị na Nzaghachi Na-adịghị Mma
Ọtụtụ n'ime ndị njem na Dubai. Ha anaghị eche n'ụzọ ziri ezi. Ọ dị mma, Kedu ihe ị kwesịrị ịdị na-eme na Dubai ?. Notghara ikwu ihe ọjọọ gbasara ụlọ ọrụ ahụ mgbe ị na-ebi.
Nihi na odi ihe okwuru n'ụzọ ịpụ n'ụlọọrụ. Ma n'ezie ndi oru, a ka na-echeta gị. Yabụ, ikwu uche gị banyere ya ọ dị mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, ndị na-achọ ọrụ ga - abụkarị na - enyocha ntụnye aka sitere na 3 ikpeazụ ruo ndị ọrụ 6. Yabụ, ma ọ bụrụ na ị hapụrụ ọrụ ikpeazụ gị na ndetu ọjọọ. Ndị ọrụ nchịkwa si ebe ahụ ga-asị na i mere aghụghọ na ọ nwere ike ịlaghachi ịchọ gị. Yabụ, gbalịa jiri ụbụrụ gị wee na-enwe ọmụmụ ihe mmetụta. Ọzọkwa, agwala ya gị ụlọ ọrụ ochie oro ekedi ndudue.
10 Gịnị ka ị ga - eme na Dubai iji lanarị?
Gbalịa mee ka uche gị dị mma mgbe ọ bụla. Anwala ime wayo. Zọ kachasị mma bụ, ime ihe n'eziokwu, na na-agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ. Dubai bụ mba siri ike nke na-anaghị anabata ọrụ ọ bụla. Ọzọkwa, mkpebi ọ bụla na-adịghị mma ga-etinye gị na nsogbu ma ị ga-abata na a A ga-ebuga gị n'ụlọ mkpọrọ na Dubai ma ọ bụ kwaga n'obodo gị. Nke ahụ bụ eziokwu, ọ ga-emetụtakwa gị.
Ikike iche echiche n'ihu ikike ịme ihe…
Ntugharị ngwa ngwa ga mee ka ọrụ nrọ gị dị!
Buru nke ahụ n'uche, Ndị India na ndị Pakistan na-achọ inweta ọrụ na UAE. Yabụ, na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ kwa ụbọchị, ọrụ ndị a dị ka ọ gaghị ekwe omume. Mana n'eziokwu, ọ bụ naanị okwu.
Yabụ, nweta onwe gị tụọ ajụjụ ọnụ ọrụ ole na ole ebe a. Ugbu a, ị maara ihe ị na-agaghị eme na Dubai. Ugbu a bụ oge maka ịchụ nta ọrụ gị ka ị na-eme atụmatụ. Akwụkwọ CV na mkpuchi akwụkwọ ga-arụ ọrụ nke ọma.
Etu esi edobe N'ajụjụ ọnụ? Naanị mee ya!
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọgbọ, ọbụna ndị nwere ezigbo ahụmahụ site na South Africa na Filipinos. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri gị ike ịnweta mkparịta ụka dị mma na azụmahịa dị n'etiti.
I choro iji zere ụdị ụdị mmejọ ụfọdụ nke Dubai. N'ihi na ha ga-ebelata ohere ị nwere inweta nhọrọ maka ị nweta ọrụ. Na n'ezie belata ohere gị maka ịkọ nke ahụ otu ọrụ nlekọta ọrụ enye.
Anyị na-agbalị mgbe niile iji hụ ndị na-achọ ọrụ si mba ọzọ. Na otu iwu ndị a na-etinye maka onye ọ bụla nọ na Dubai. Na Middle East n'ezie bụ nnukwu ebe na-eche maka ọdịnihu gị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-agbaso UAE iwu kwesiri. I kwesiri inweta oru na Dubai ma obu Abu Dhabi. Gbalịakwa mee ihe gị nrọ ọrụ, eziokwu. N’agbanyeghị etu o si yie ihe ọjọọ. Gbalịa izere potholes. Na-alụ ọgụ ka ume ikpeazụ.
Kedu usoro iji ejiji dị ka nwa akwụkwọ ọhụrụ?
N'ebe kachasị njọ ụmụ akwụkwọ ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ na ahụmahụ MBA. Ọ bụ naanị nke na - enweghị echiche ọ bụla ihe kpatara ụmụ akwụkwọ niile na - eto eto agaghị enwe ohere na-enweta ọrụ na Dubai.
Themụ obere ọrụ na-achọ ọrụ ga-anwa ịme nnukwu ụgwọ a mgbe ha nwesịrị gụsịrị akwụkwọ na mahadum. A ga-ahapụkwa ha naanị ha. Yabụ, n'eziokwu, Ha kwesịrị ịkpata ego kacha.
Dika onye ohuru n’ile ahia ahia Dubai. Ikwesiri ịmalite nwayọ, kwụsị iche na ị bụ onye gụrụ akwụkwọ. Ikwesiri ịmalite iji nwayọ nwayọ na ụwa ụlọ ọrụ. Site na ya-odighi iche. Maka mmadụ ọ bụla n'agbanyeghị ụdị ọmụmụ ha jisie ike iji nweta ọrụ na Dubai.
Ihe ụzọ eji dị ka Manager na Dubai?
Ndị nwere ahụmịhe mara mma nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ma na United Arab Emirates, enwere ụwa nke ọnụ na njikọ dịka ọnụọgụ nke na - enye gị ohere iji nweta ọrụ na ọkwa nchịkwa.
I nwere ike iche na ọ bụ ezighị ezi maka gị dị ka onye na-agafe. Ma, ị ga-enye ndị ọrụ gị onye ị na-amaghịdị ?. Ya mere, Dubai bụ ebe dị mma ma enwere iwu ị ga-agbaso. Ma ọ bụrụ na ị na-akwụ onye na-ezighị ezi ụgwọ na ọ mehiere.
Ọ dị nwute, ọ bụ ndudue ndị na-akpata ego na n'iwu ya ka ọ dị idozi nke ahụ. Ma n'ọtụtụ oge nke na-ewe oke iwe na nnukwu ego na n'ezie, ọnwa ole na ole.
Manager na Dubai
mmechi - Kedu ihe ị ga-eme na Dubai?
Chọ a ọrụ Dubai chọrọ ndidi na mkpebi siri ike. Yabụ, n'ozuzu na-ekwu, ọ bụghị mmadụ niile ka a ga-agọzi maka inweta ọrụ na a obodo mara mma. Nwere olile anya na ị natala ndụmọdụ ole na ole si Ụlọ ọrụ Dubai City. You ga - eji ha mezuo ndap ndap fo ke Dubai.
Na-emelite usoro Vitae gị mgbe niile. Debe akwụkwọ ozi mkpuchi gị emepụtara nke ọma maka ọrụ ị ga-enye gị. Zipu CV kwa oge na lelee ahụmịhe mgbasa ozi ọrụ tupu izipu CV ka ndị were gị n'ọrụ.
Odi nma, tupu ndi mmadu nwee ike itule na CV. Ma oge ndị ahụ na-abịa na njedebe. Ugbu a, lelee nyocha dị mfe ya na ndi isi n’eniile. Yabụ, ọ bụrụ na ha achọpụta na ọ ga-eme ihe ọjọọ karịa nke ọma. Na Dubai, enwere uzo di nkpa ya na eziokwu gi.
Kedu ihe ị ga-eme iji nweta ọrụ na UAE?
Ihe ikwesiri ime tupu ị gawa !. Gbada na ndepụta nke ọrụ dị iche iche ma tinye otu n’otu. Maka ezigbo ọrụ ị ga-achọ itinye n'ọrụ naanị na legit ọrụ saịtị.
Lelee onye ndumodu ojoro ma nwee ihe omuma banyere ulo oru ndi ozo. Ndi ana-akpo kọntaktị ma ọ bụ ntụaka dị mkpa ọrụ dị mkpa iji nweta ọrụ. Soro mezie ntanetị na ihe omume iji nwetakwuo ohere oru.
Ebe E Si Nweta: https://www.scamadviser.com/
Ya mere, gaa na weebụsaịtị wee tinye adreesị weebụ. Hụrụ ụlọ ọrụ ndị a siri ike ilele online. Shouldkwesighi ịtụle ịkwụ onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ụgwọ ọrụ. Offọdụ n’ime ha nwere ike nyere gị aka inweta ọrụ na nnọchite gị. Mana ọ dabara na, ọtụtụ n'ime ha bụ naanị ụlọ ọrụ ojoro.
N'ichebara ihe niile kwuru n'elu!
O doro anya na Dubai na ịchọ ọrụ bụ ihe siri ike ijikwa. Ọtụtụ ihe mgbochi na ọtụtụ puku, n'ezie, iji chọta ọrụ nrọ gị ikekwe ọ baghị uru na njedebe.
Will ga-enweta ọrụ na-eji ụfọdụ ikike ọrụ dị ka ndị ahịa ọrụ ọrụ isi ohere. Agbanyeghị, ịnweta ọnọdụ nke nrọ gị nwere ike ọ gaghị ekwe omume na Dubai na mbido. Yabụ, gbaa mbọ nweta ọrụ ọ bụla na mbido wee jiri nwayọ gbagoro elu na ụlọ ọrụ. Yabụ, Ihe ị ga - eme na Dubai? Dị mma iji mee ka ịnyịnya ibu gị banye na nke ọzọ. Ọrụ siri ike na ịchọ ọrụ ọrụ. Kwụsị na-arọ nrọ banyere ọrụ nro Arabic.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates na iji asụsụ gị.